ओम अस्पतालको लापरवाही- पत्थरीको अपरेशन गर्दा आन्द्रा काटिएपछि रामप्यारीको मृत्यु – Nepal Japan
नेपाली समय : 11:33:06
जापानी समय : 02:48:06
Tag: ओम अस्पतालको लापरवाही- पत्थरीको अपरेशन गर्दा आन्द्रा काटिएपछि रामप्यारीको मृत्यु
ओम अस्पतालको लापरवाही- पत्थरीको अपरेशन गर्दा आन्द्रा काटिएपछि रामप्यारीको मृत्यु
Posted on June 13, 2019 June 13, 2019 by Yadav Devkota
काठमाडौंको प्रतिष्ठित अस्पतालमा पर्ने चावहिलस्थित ओम अस्पतालको लापरवाहीका कारण एक ५० वर्षीया महिलाको ज्यान गएको छ । पित्तथैलीको अपरेशन गरेको ६ दिनपछि सिन्धुपाल्चोककी रामप्यारी थापाको मृत्यु भएको हो ।
अस्तालको लापरबाही भएको भन्दै मृतकका आफन्तले अस्पताल परिसरमा नाराबाजी गर्दै यसबारे उचित छानबिन हुनुपर्ने, डाक्टरले माफी माग्नुपर्ने र उचित क्षेतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
ड्रिल गरेर अपरेशन गर्दा सानो आन्द्रा पनि छेडिएको र त्यो नटाल्दा शरीरभर संक्रमण फैलिएर बिरामीको मृत्यु भएको मृतकका आफन्तले बताएका छन् । बिरामीका आफन्त खड्ग श्रेष्ठले निको हुँदैछ भनेर डक्टर भन्नुभएको थियो । तर आज विहान सात बजे मृत्यु भयो भन्नुभयो । अस्पतालको चरम लापरवाहीले राम्रै मानिसको पनि यो हालत भएको बताउनुभयो ।
गत शुक्रबार डा. रविन कोइरालाको नेतृत्वमा रामप्यारीको अपरेशन भएको थियो । तर, शनिबार विहानैदेखि अचानक रामप्यारीलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या देखियो । रक्तचाप ह्वात्तै घट्यो, कम्प्रेसर बढ्ने लगायतका समस्या हुन थाल्यो । शनिबार नै अस्पतालले सम्पूर्ण जाँच गर्‍यो र, रामप्यारीलाई आईसीयूमा राख्यो ।
अस्पतालले आइतबार मात्र रामप्यारीको आन्द्रामा प्वाल परेको पत्ता लगायो । त्यही दिन अर्को अपरेशन गरियो । अपरेशनका क्रममा मलद्वारतर्फ जाने डेढ मिटर आन्द्रा काटेर फ्याकिएको डा. कोइरालाले विरामीको आफन्तलाई जानकारी दिए । अप्रेशनपछि रामप्यारीलाई भेन्टिलेशनमा राखियो । दिनमा ६० हजार रुपैयाँसम्म औषधी प्रयोग गरियो र उपचारको क्रममा चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको थियो ।
Posted in जन सरोकारTagged ओम अस्पतालको लापरवाही- पत्थरीको अपरेशन गर्दा आन्द्रा काटिएपछि रामप्यारीको मृत्यु